Akụkọ Bible: Jizọs Dị Ndụ - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
Ị̀ MA onye nwaanyị a na ndị ikom abụọ ahụ bụ? Nwaanyị a bụ Meri Magdalin, enyi Jizọs. Ndị ikom ahụ yi uwe ọcha bụ ndị mmụọ ozi. Ime ụlọ nta a Meri na-eleba anya bụ ebe e debere ozu Jizọs mgbe ọ nwụrụ. A na-akpọ ya ili. Ma ozu ahụ adịghịzi n’ime ya ugbu a! Ònye buuru ya? Ka anyị hụ.
Mgbe Jizọs nwụrụ, ndị nchụàjà sịrị Paịlet: ‘Mgbe Jizọs nọ ndụ, ọ sịrị na a ga-akpọlite ya ma ụbọchị atọ gasịa. Ya mere, nye iwu ka e chewa ili ahụ nche. Ka ndị na-eso ụzọ ya wee ghara ịbịa zuru ozu ya, wee kwuo na a kpọlitewo ya n’ọnwụ!’ Paịlet wee gwa ndị nchụàjà ka ha ziga ndị agha ka ha na-eche ili ahụ nche.
N’isi ụtụtụ ụbọchị nke atọ mgbe Jizọs nwụsịrị, mmụọ ozi Jehova bịara na mberede. O nupụrụ nkume e ji dochie ọnụ ili ahụ. Ụjọ tụrụ nnọọ ndị agha ahụ nke na ha apụghị imegharị ahụ́. N’ikpeazụ, mgbe ha lebara anya n’ili ahụ, ozu ahụ adịghịzi n’ime ya! Ụfọdụ ndị agha ahụ bara n’ime obodo wee gwa ndị nchụàjà. Ị̀ ma ihe ndị nchụàjà ọjọọ ahụ mere? Ha nyere ndị agha ahụ ego ka ha ghaa ụgha. Ha gwara ndị agha ahụ: ‘Sịnụ na ndị na-eso ụzọ ya bịara n’abalị mgbe anyị na-ehi ụra zuru ozu ya.’
Ụfọdụ ndị inyom bụ́ ndị enyi Jizọs gara n’ili ahụ. O juru ha nnọọ anya na ili ahụ tọgbọ nkịtị! Meri Magdalin gbapụrụ ije kọọrọ Pita na Jọn. Na mberede, ndị mmụọ ozi abụọ yi uwe ọcha pụtara n’ihu ndị inyom ndị ọzọ ahụ. Ha jụrụ ha, sị: ‘Gịnị mere unu na-achọ Jizọs n’ebe a? A kpọlitewo ya. Jeenụ ọsọ ọsọ gwa ndị na-eso ụzọ ya.’ Ndị inyom ahụ gbasiri ọsọ ike! Ma otu nwoke kwụsịrị ha n’ụzọ. Ị̀ ma onye ọ bụ? Ọ bụ Jizọs! Ọ sị ha: ‘Jeenụ gwa ndị na-eso ụzọ m.’
Mgbe ndị inyom ahụ gwara ndị na-eso ụzọ Jizọs na Jizọs dị ndụ, na ha ahụwo ya, o siiri ha ike ikwere. Pita na Jọn gbagara n’ili ahụ iji anya ha hụ, ma ili ahụ tọgbọ nkịtị! Mgbe Pita na Jọn lara, Meri Magdalin, bụ́ onye lọghachiteworonụ n’ili ahụ, nọgidere n’ebe ahụ. Mgbe ahụ ka o lebara anya n’ime ili ahụ wee hụ ndị mmụọ ozi abụọ ahụ.’
Ị̀ ma ihe mere ahụ́ Jizọs? Chineke mere ka ọ pụọ n’anya. Chineke emeghị ka Jizọs dịghachi ndụ n’anụ ahụ́ ahụ o ji nwụọ. O nyere Jizọs ahụ́ ọhụrụ nke mmụọ, dị ka ndị mmụọ ozi nọ n’eluigwe nwere. Ma iji gosi ndị na-eso ụzọ ya na ya dị ndụ, Jizọs pụrụ iyikwasị ahụ́ nke ndị mmadụ pụrụ ịhụ anya, dị ka anyị gaje ịhụ.
Ònye bụ nwaanyị a nọ na foto a, ole ndị bụ ndị ikom abụọ ahụ, oleekwa ebe ha nọ ihe a?
N’ihi gịnị ka Paịlet ji gwa ndị nchụàjà ka ha ziga ndị agha ka ha chewe ili Jizọs nche?
Gịnị ka otu mmụọ ozi mere n’isi ụtụtụ ụbọchị nke atọ ka Jizọs nwụsịrị, ma gịnị ka ndị nchụàjà ahụ mere?
N’ihi gịnị ka ụfọdụ ndị inyom ji nwee ihe ijuanya mgbe ha gara n’ili Jizọs?
N’ihi gịnị ka Pita na Jọn ji gbaga n’ili Jizọs, gịnịkwa ka ha hụrụ?
Gịnị mere ahụ́ Jizọs, ma gịnị ka o mere iji gosi ndịozi ya na ya dị ndụ?
Gụọ Matiu 27:62-66 na 28:1-15.
Mgbe a kpọlitere Jizọs n’ọnwụ, olee otú ndị isi nchụàjà, ndị Farisii, na ndị okenye si mehie megide mmụọ nsọ? (Mat. 12:24, 31, 32; 28:11-15)
Gụọ Luk 24:1-12.
Olee otú akụkọ banyere mbilite n’ọnwụ Jizọs si gosi na Jehova na-ele ndị inyom anya dị ka ndị pụrụ ịgba akaebe ziri ezi? (Luk 24:4, 9, 10; Mat. 28:1-7)
Gụọ Jọn 20:1-12.
Olee otú Jọn 20:8, 9 si enyere anyị aka ịhụ mkpa ọ dị inwe ndidi mgbe anyị na-aghọtachaghị otú otu amụma Bible si mezuo? (Ilu 4:18; Mat. 17:22, 23; Luk 24:5-8; Jọn 16:12)
Olee otú Jizọs si gosi ndị na-eso ụzọ ya na a kpọlitela ya n’ọnwụ?
Baịbụl kwuru na e mere ka Jizọs “dị ndụ na mmụọ,” oleezi otú ndị na-eso ụzọ ya si hụ ya, metụkwa ya aka mgbe a kpọlitechara ya n’ọnwụ?